Al-Shabaab ayaa xeray Garoomada kubada cagta ee magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAl-Shabaab ayaa xeray Garoomada kubada cagta ee magaalada Muqdisho
11/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 11, 2018:- Al-Shabaab ayaa xiray inta badan Garoomadda lagu ciyaaro kubadda Cagta ee loo yaqaan (Salaxa) kadib markii muddooyinkii dambe ay wadeen xiriiro kala duwan oo ay la sameynayeen Milkiilayaasha goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta.
Horay Al-Shabaab waxa ay u xireen goobo lagu Ciyaaro Kubadda Cagta oo ku yaallo Degmooyinka, Dayniile, Yaaqshiid, Kaxda Iyo Heliwaa, haddana waxa ay amaro dul dhigeen goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta ee ku dhaw xayndaabka wadada Maka Al-Mukarama.
Dhawr Salax oo ku yaallo nawaaxiga Wadada Maka Al-Mukarama Milkiilayaasha iska leh, ayaa xalay lagula soo xiriiray Taleefoonka waxaana loo sheegay inay xiraan goobahaasi illaa amar dambe.
Mid ka mid ah dhalinyarada doonaysay galabta inay ku ciyaaraan Kubadda Cagta Salaxa ku yaallo dhabarka dambe ee Hotel Maka Al-Mukarama, ayaa Milkiilaha Garoonka wuxuu u sheegay inay iska xireen Garoonka illaa amar dambe, kadib amarka Al-Shabaab ay soo bixiyeen.
“Xalay ayaa taleefoon naloo soo diray meesha salaxa xira ayaa nala dhahay illaa amar dambe, wax kale nooma aysan sheegin.” Ayuu yiri Milkiilaha Garoonkan Kubadda Cagta ee Salaxa lagu ciyaaro.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shaqada ka joojiyay xubno ka tirsan dowlada Hoose ee Xamar